နီဗားဒါးပြည်နယ်လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မြို့မှ အင်ကြင်းခိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cover Faces » နီဗားဒါးပြည်နယ်လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မြို့မှ အင်ကြင်းခိုင်
Posted by kai on Oct 20, 2011 in Cover Faces | 23 comments
အသက်၉နှစ်အရွယ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှအမေရိကနိုင်ငံ လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည့် အင်ကြင်းခိုင်(စာရေးဆရာမောင်သာရ၏မြေး)အား ၂၀၁၁မေလ၌တွေဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
သမီးနာမည်ကအင်ကြင်းခိုင်။ အဖေဦးအောင်၊ အမေဒေါ်အိမ့်။မွေးချင်း၎ယောက်ရှိတယ်။ အကို၂ ယောက်မောင်တယောက်ရှိပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ မွေးရပ်ဇာတိက မနဿတလေးပါ။အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးပါပြီ။
သမီးကမနဿတလေးမှာသူငယ်တန်းကနေ၃တန်းအထိတက်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ၎တန်းတက်တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ၃နှစ်ကျောင်းဆက်တက်တယ်။ အမေရိကားရောက်တဲ့အချိန်မှာ၇တန်းကိုစတက်ပါ တယ်။ အခုCollege of Southern Nevada မှာ Business Management နဲ့ Administration
ထိုင်းမှာနေတုန်းက အဂင်ဿလိပ်စာသင်ခဲ့ရပါတယ်။ အရေး၊အဖတ်၊ရတယ်။ ပြောရင်နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တန်း အမေရိကကိုရောက်လာတော့ ဒီကလူတွေပြောတာတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အသံထွက် တွေကွဲလွဲနေတော့သူများပြောတာနားလည်ပေမယ့် သမီးကစကားပြောမထွက်ဘူး။ သမီးပြောတာကိုလဲသူတို့သိပ်နားလည်ပုံမရတော့ အစမှာတော်တော်လေးစိတ်ညစ်ရတယ်။ နောက်ကျောင်းတက်တော့လဲမြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းမှာကစာသင်ခန်းတခုထဲမှာဘဲထိုင်နေရုံပဲ။ ဆရာ/ ဆရာမတွေကသူ့အချိန်နဲ့သူဝင်လာသင်ကြတယ်။ အမေရိကမှာကကျောင်းသားတွေကစာသင်ခန်း တွေပြောင်းတက်ရတယ်။ စာသင်ချိန်ပြောင်းခေါင်းလောင်းတီးတဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေအားလုံးထ ထွက်သွားကြတော့သမီးကကြောင်သွားတယ်။ ကျောင်းဆင်းသွားပြီလားပေါ့၊ဖြစ်တော့လဲမဖြစ်နိုင် ဘူး၊ ကျောင်းတက်တာမှမကြာသေးဘူး၊ ကျောင်းဆင်းသွားတော့မဟုတ်လောက်ဘူးပေါ့လေ။ သူများနောက်လိုက်ကြည့်တော့စာသင်ခန်းပြောင်းနေကြတာဖြစ်နေတယ်။ သမီးကျောင်းစတက်တုန်းကပေးထားတဲ့စာရွက်ကိုကြည့်တော့အခန်းနံပါတ်တွေရေးထားတယ်။ ဒီတော့သမီးကစဉ်းစားတယ်။ အင်း…ဒီအခန်းတွေကိုများသွားရမလားမသိဘူးပေါ့။ ကျောင်းမှာ ဘယ်အခန်းတွေကဘယ်မှာရှိမှန်းလဲသမီးကမသိ။ ဒါနဲ့အနားမှာတွေ့တဲ့ ကျောင်းသား တယောက်ကို မေးရတယ်။ သူညွှန်မှပဲအခန်းရှာတွေ့တယ်။ နောက် မုန့်စားဆင်းတော့လဲအချိန်ခွဲထားတယ်။ သမီးကဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ နောက်ရက်မှာဘေးနားကကျောင်းသားကိုစာရွက်ပြပြီးမေးရတယ်။ ငါနားမလည်လို့ရှင်းပြပါဆို တော့သူကသေချာရှင်းပြတယ်။ ထမင်းစားချိန်ကိုဘယ်အချိန်ကိုယူရတယ်။ ဘယ်နေရာမှာသွားစား ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ထဲရောက်တော့လဲသူတို့ပြောတာကိုယ်နားမလည်။ကိုယ်စားချင်တာကိုပြောလို့လဲ သူတို့ကနားမလည်ဆိုတော့ကောင်တာမှာတင်ထားတဲ့ဟာကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးစားရတယ်။ သမီးတို့မြန်မာပြည်မှာကနို့ကိုပုလင်းနဲ့ခွက်နဲ့ဘဲမြင်ဘူးခဲ့ပေမဲ့အမေရိကမှာကစကဿကူဗူးနဲ့ဆိုတော့ သမီးကလဲတခါမှမဖွင့်ဘူးတော့ ဗူးမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ဖေါက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့်သမီးက ပါးစပ်နဲ့ကိုက်ဖြတ်ပြီးဖေါက်တာတွေ့တော့ သူငယ်ချင်းကနင်ဖေါက်တာကြည့်ရတာ ပင်ပန်းလိုက် တာ။ ဒီလိုဖေါက်ရတယ်ဆိုပြီးဗူးလေးကို ဟိုဘက်ကဆွဲဒီဘက်ကလှည့်ပြီးဖေါက်လိုက်တော့ အလွယ် လေးပါလားဟဆိုပြီးသူပြတဲ့ အတိုင်းနောက်ပိုင်းမှာလိုက်လုပ်ရတယ်။ စာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့သမီးရဲ့အဂင်ဿလိပ်စာအရေးအသားတွေကကောင်းပါတယ်။ သမီးရေးထား တာတွေတောင်ဘေးကကျောင်းသားတွေကြည့်လို့သမီးကတော့ပြလိုက်တာပဲ။ သခင်ဿျာဆိုရင်လဲဒီလိုပဲ။ဆရာမကကျောက်သင်ပုန်းမှာရေးနေတယ်။ သမီးကအောက်ကလိုက်တွက်တယ်။ သမီးကမြန်မာပြည် ကနည်းအတိုင်း တွက်ချလိုက်တာ ခဏဆိုအဖြေထွက်နေပြီ။ ဆရာမက ပြီးရင်လက်ထောင်ဆိုတော့ သမီးအရင်ဆုံးလက်ထောင်နိုင်တော့ဆရာမကသိပ်မသကင်ဿာဘူး။ သမီးကကျောင်းသားသစ်၊ ခုမှ ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တယ်ဆိုတာကိုလဲသိနေတော့ခိုးများချသလားပေါ့လေ။ ဆရာမကအမြဲလာလာကြည့် တယ်။ နောက်ပိုင်းသမီးစာကြိုးစားတာသိတော့မှဆရာမလဲသမီးကိုယုံကြည်လာတယ်။ဆရာမက သမီးရဲ့တွက်နည်းကအရမ်းမြန်လို့ သမီးကိုအတန်းရှေ့ထွက်ခိုင်းပြီး နင့်တွက်နည်းနဲ့တတန်းလုံးကိုရှင်း ပြလိုက်ဆိုတော့သမီးအရမ်းစိတ်ညစ်သွားတယ်။ သမီးကတွက်ဆိုရင်တွက်ချလိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေ မယ့်အတန်း ရှေ့ထွက်ပြောဆိုကိုယ်တိုင်ကစကားအရမ်းမပြောတတ်တာရယ်၊ ရှင်းပြတဲ့အလုပ်ကို လုံး ၀၀ါသနာမပါတာရယ်ကြောင့်မလုပ်ချင်ပေမယ့်လဲဆရာမပြောခိုင်းတော့သမီးတွက်ပြလိုက်ပြီးစကား ထစ်ငေါ့ထစ်ငေါ့နဲ့ရှင်းပြနေတော့ဆရာမကနောက်ကနေထောက်ပြီးဝိုင်းရှင်းပြပေးပါတယ်။ ကွန်ပျူတာအခန်းမှာကျတော့သမီးကသိပ်မသိဘူးလေ။ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာဆိုရင်သူငယ်ချင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းရတယ်။
လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မှာနေတာ၆နှစ်ရှိပါပြီ။ွမညေအှတေပနမကျောင်းမှာ ၉-၁၀တန်းတက်ခဲ့ပြီး ၁၁-၁၂ တန်းကိုတောီ့နျနမအ ဥျေငျ ကျောင်းမှာတက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘ
သမီးအဆိုအက၀ါသနာပါပါတယ်။အဆိုကပွဲကြီးတွေဘာတွေမှာဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပျော်ဆိုတာလောက်ပဲရှိပါတယ်။ အကကိုတော့ပွဲတော်တော်များများမှာကခဲ့ဘူးပါတယ်။ြ
အကကိုအမေကသင်ပေးတာပါ။ ထိုင်းမှာနေတုန်းကအသက်၁၂နှစ်လောက်မှာ သမီးတက်တဲ့ ကျောင်းကခရစ်စမတ်ကပွဲမှာ မင်းသမီးအနေနဲ့ ပထမဆုံးအငြိမ့်ကခဲ့ပါတယ်။ တခြားမြန်မာကျောင်း သားတွေက လူရွှင်တော်လုပ်ကြတယ်။ ၂၀၀၄-၂၀၀၅နယူးယောက်မှာလုပ်တဲ့သင်္ကြန်ပွဲတွေမှာလဲကခဲ့ပါတယ်။ လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မှာလုပ်တဲ့မြန်မာပွဲတွေ၊ နောက်၂၀၁၁မေလ၂၅ရက်နေ့လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မှာ ဗျငညေ ဗာနမငခညေံနမငအေါန သြညအ့ ဃနူနဘမအေငသည မှာလုပ်တဲ့ အာရှရိုးရာကပွဲမှာ ကိုရာပြည့်ရယ် သမီးရယ် နောက်ကလေးအတွဲ၂စုံတွဲ စုစုပေါင်း၃စုံတွဲက မြန်မာ့ရိုးရာအကကိုကခဲ့ကြပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေတုန်းကလဲကခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်လော့စ်အိန်းဂျလိစ်က၂၀၀၉သင်္ကြန်လှယဉ်ကျေးမယ်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးတယ်။ လော့စ် အိန်းဂျလိစ်သင်္ကြန်ပွဲတွေမှာသမီးတို့လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မြန်မာလူငယ်အုပ်စုကခဲ့ကြတာ၃နှစ်ရှိပါပြီ။
အယ်လ်အေမှာလုပ်တဲ့၂၀၀၉သင်္ကြန်မယ်ရွေးပွဲကိုသမီးနဲ့လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်ကသူငယ်ချင်းတယောက် ၀င်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သမီးတို့ကအဝေးမြို့ကဆိုတော့ကြိုတင်လေ့ကျင့်တာတွေကို တခြားပြိုင်ပွဲဝင် တွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီတော့သမီးတို့သူငယ်ချင်း၂ယောက် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိသေးဘူး ။ကြောင်တောင်တောင်တော့ ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒီလိုမျိုးမယ်ရွေးပွဲတွေဆိုတာလဲတခါမှမပြိုင်ဘူးတော့ နဲနဲတော့စိတ်ပူတာပေါ့။ ပထမအကျော့လမ်းလျှောက်ကြတဲ့အခါမှာလဲဘေးကရှေ့ကလူအတိုင်းလိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်။ နောက် ဒုတိယကျော့ထွယ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသမီးရဲ့ကတဿတီပါဖိနပ်ကရုတ်တရက်ပြတ်ထွက်သွားတယ်။ သမီး အရမ်းစိတ်ညစ်သွားတယ်။ သမီးပူထူသွားပေမဲ့သူငယ်ချင်းရဲ့ဖိနပ်ငှားစီးပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်။ သမီးကမယ်ရွေးပွဲတင်မကဘူး၊ လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်အကအဖွဲ့နဲ့အတူကဖို့လဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ ပွဲက လိုက်၊ မယ်ရွေးပွဲအတွက်အကျင်ဿီပြန်လဲရနဲ့၊ ရာသီဥတုကလဲပူရတဲ့အထဲ အကျင်ဿီကွှိုနညအ ထဲမှာလဲရတယ်ဆိုတော့လူတကိုယ်လုံးချွေးတွေပျံနေတာပဲ၊အကျင်ဿီလဲရတာတော်တော်ဒုကဿခရောက်ခဲ့တယ်။ အိုက်တင်တွေလမ်းလျှောက်တာတွေကိုအိမ်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှိုးတွေကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်ထား တာပေါ့။ အမေရိကမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေလမ်းလျှောက်သလိုသမီးလဲသူတို့လိုလျှောက်ကြည့်တယ်။လေ့ကျင့်တယ်။ အမေတို့ကအိုက်တင်တွေဘာတွေကိုလာသင်ပေးပေမယ့် သမီးကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောပြီးကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်အိုက်တင်ပြင်ပါတယ်။ နောက်ွှေူနညအှ့သတ ကိုသမီးကအမေနဲ့တိုင်ပင်တယ်၊သမီးကမြန်မာအကလဲကနိုင်တယ် ။ဘိုအက၊ဘဲလေးအကလဲကတတ်တယ်။ ဟာဝိုင်ယီအကလဲကျောင်းမှာသင်ထားတယ်ဆိုတော့ အကကို၃မျိုးလောက်ရောပြီး ကချင်တယ်ဆိုတော့ အမေကသဘောတူပါတယ်။ ဒါနဲ့သမီးလဲသီချင်း၃ပုဒ်ကို၂မိနစ်စာကိုယ်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းတွေဖြတ်ညှပ်ပြီးအမေ့ကိုဖွင့်ပြတယ်။ အမေကမြန်မာအကပိုင်းမှာအချိန်နဲနေတယ်။ ကိုယ်ကမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအကကိုအချိန်နဲနဲပိုထည့်၊ တခြားအကတွေလျှော့ဆိုတော့လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ပြီး အမေကြိုက်သွားတော့မှသမီးကကွက် ကိုထွင်တယ်။မြန်မာအကမှာအမေက သမီးကတာကြည့်ပြီးအကြံပေးပါတယ်။ ဆုပေးတဲ့အချိန်မှာ ဆုတွေအမျိုးအစားအများကြီးခွဲပြီး ပေးသွားတာတွေ တွေ့ရတယ်။ဘာတွေပေးမှန်းတော့မသိဘူး။ တယောက်ပြီး တယောက်ဆုခေါ်ပေးတာတောင်တော်တော်ကုန်သ လောက်ဖြစ်နေပြီ၊ငါ့နာမည်လဲအခေါ်မခံရသေးဘူး။ ငါတော့ဘာဆုမှမရဘဲပြန်ရတော့မယ်ထင်တယ်၊ ဘာမှမရရင်တော့ အမေစိတ်ညစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတွေးပူနေမိတယ်။ ဒုတိယဆုရတယ်လို့ကျေညာ လိုက်တော့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ အမေ့ကိုလှမ်းကြည့်တော့ အမေပြုံးနေတာတွေ့တော့ သမီး လဲစိတ်အေးပြီးပျော်သွားတယ်။ စိတ်ထဲမှာသိပ်မမှန်းထားပါဘူး။ ပျော်ရမလိုလို၊ငိုရမလိုလိုဖြစ်သွား တယ်။ ပထမဆုမရခဲ့ပေမဲ့အရမ်းတော့ပျော်သွားပါတယ်။ဂုဏ်လဲယူပါတယ်။ြ
အရမ်းပြန်လည်ချင်ပါတယ်။ သမီးမရောက် ဘူးတဲ့နေရာတွေသွားလည်ချင်တယ်။ မြန်မာ ပြည်အနှံ့ ဘုရားဖူးထွက်ချင်တယ်။ ဈေးဝယ် ထွက်ချင်တယ်။ သမီးကငယ်ငယ်ကတည်းကမြန်မာပြည်ကထွက်လာတာဆိုတော့အဲဒါတွေမလုပ်ခဲ့ရတော့လုပ်ချင်တယ်။ေ
သမီးအခုကျောင်းတက်ရင်းအလုပ်လုပ်နေပါ တယ်၊တပတ်ကို၂၂နာရီလောက်လုပ်ပါတယ်။ ဏူညေနအံသူပတသသိ မှာလုပ်နေပါတယ်။ ကျောင်းတက်ရင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ခု နောက်ပိုင်းမှာ အားလပ်ရက် သိပ်မရှိတော့ပါ ဘူး။ အရင်ကတော့ အားရင်တီဗီတွေဘာတွေ ကြည့်နိုင်သေးတယ်။ ခုတော့ အလုပ်မရှိရင် ကျောင်းစာတွေကိုလုပ်နေရလို့သိပ်အားချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ ဘယ်လိုတီဗီအစီအစဉ်မျိုးတွေကိုကြည့်သလဲ၊ သမီးအများဆုံးကြည့်ဖြစ်တာတွေကတောီ့ညေခငညါ တငအ့ အ့နှအမျေယ ဗာနမငခညေ ညနထအ အသစာသိနူယ ဗာနမငခညှေိုသူ.
မြန်မာစာကြိုက်တယ်။ချဉ်ငံစပ်တွေပါ။ငါးပိကြော်၊ငါးပိရည်၊အထူးသဖြင့်ငရုတ်သီးမပါလို့ မရဘူး။သမီးကအစပ်အရမ်းစားတယ်၊ဆရာဝန်ကပြောတယ်၊ ငရုတ်သီးလျှော့စာရမယ်တဲ့။သမီးကကြိုးစားပါ့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
သမီးအခုလက်ရှိစီးနေတာက၂၀၀၇တိုယိုတာ ကိုရိုလာ။ စီးချင်တဲ့ကားကမာစီးဒီးဒါမှမဟုတ် ဘီအမ်ဒဗလျူ…ကွန်ပျူတာကီနူယ ဆဲလ် ဖုံးကျှောကညါ ကိုသုံးပါတယ်။ ဘ
မင်းသားမင်းသမီး အကြိုက်ကြီးတော့ မရှိ ဘူး။ အဆိုတော်ထဲမှာအယ်လ်ဇိုင်းဆီ၊ရေဗက္ကာ ၀င်း၊ ရဲလေးနဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်တို့ကိုကြိုက် ပါတယ်။ကြိုက်တဲ့သီချင်းအမျိုးအစားကံငစံသစယွှနခ့ညသ နဲ့အဆွေးသီချင်း။ ဘ
သမီးက စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ချင်ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးပြီးချင်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဆို တာ မလွယ်ဘူးထင်တာပဲ။ ဒါကြောင့် တခုခု အ ရင်အလုပ်လုပ်ရင်းပိုက်ဆံစုမယ်၊ ပြီးမှကိုယ်ပိုင် ဆိုင်ဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့စဉ်းစားထား ပါတယ်။
ဘာမှမစဉ်းစားပဲနဲ့ ခေါင်းထဲရောက်လာတာ ဆိုရင်တော့ အဖိုး(စာရေးဆရာမောင်သာရ)နဲ့ နယူးယောက်ကိုရထားနဲ့သွားကြတာ။နယူး ယောက်ကို လေယာဉ်နဲ့သွားလို့ ရပေမယ့် အဖိုးကရထားနဲ့ဘာလို့သွားရတာလဲလို့အဖိုးကို မေးတော့နင့်ကိုဗဟုသုတရစေချင်လို့တဲ့။ လမ်း တလျှောက်မှာ တွေ့သမျှတွေကို ရှင်းပြတယ်။ ပြောပြတယ်။ အဖိုးက အရမ်းကို ဗဟုသုတနဲ့ ပြည့်ပြီးအရမ်းသင်ပြတတ်တယ်။
သမီးအနေနဲ့တလတစောင်ထွက်တာကိုကြိုက် ပါတယ်။ သတင်းစာတစောင်ဖြစ်ဘို့ မလွယ် ဘူးဆိုတာကို သိပေမယ့်လဲ လစဉ်မှန်မှန်ဖတ် ချင်တယ်။ သမီးသိချင်တာလေးတွေကို အမြန်ကြည့်နိုင် တယ်ပေါ့နော်။ လခြားနေတော့သမီးအနေနဲ့ဖတ် ရတာအားမရဘူး။ ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာရဲ့ဘယ်ကဏ္ဍတွေကိုကြိုက်သလဲ သမီးကသတင်းစာရရင် အလှပန်းကဏ္ဍကို အရင်ဖတ်တယ်။ ပြီးရင် ဘယ်နေရာမှာဘာပွဲ တွေလုပ်သလဲဆိုတာကိုကြည့်တယ်။ပြီးတော့ ကြော်ငြာတွေကိုကြည့်တယ်။ သမီးသိချင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ အလှပြင်ဆိုင်တွေ၊ ဘယ် သူတွေ ဘာလုပ်နေကြသလဲ ဆိုတာတွေကို ဖတ်တယ်၊ နောက်မှအချိန်ရရင်ရသလိုတခြားဟာတွေကိုဖတ်တယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ၂၀၁၁ သြဂုတ်လထုတ် မန္တလေးဂေဇက် အလှပန်းကဏ္ဍတွင် ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကိုခိုင် ရေဆရာကြီးဦး မောင်သာရရဲ့
ဒီကလေးမ ဘာတော်နေမှန်းကို မသိဘူး ။
အဲဒါ.. အင်တာဗျူးစာရိုက်ပြီး ပို့လာတဲ့. font.မတူလို့..
ဒီမှာတင်ဖို့.. ဇော်ဂျီကို ပြောင်းတာ… အင်္ဂလိပ်စာက.. ပြင်းတာနဲ့..တလုံးခြင်းလိုက်မပြောင်းဖြစ်တာမို့.. ဒီအတိုင်းကျန်နေတာပါ..။
နဂိုကလဲ တော်..ကြိုးလဲ ကြိုးစားတာဆိုတော့..ကောင်းတယ်.ကောင်းတယ်
မြန်မာပြည်ကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်ပြီး အောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့ သူကြီးဦးခိုင် ဆိုတာကို အဲဒီ မေးခွန်းတွေအတိုင်း မေးပေးပါဦးဗျာ သူနေတဲ့ လိပ်စာတော့ မသိဘူးဗျာ ရွာဆိုလာ ဘာဆိုလာမှာ သူကြီးလုပ်တာလို့တော့ သိရတယ်ဗျ ကြားဖူးတာက မိန်းမနဲ့ ရန်ဖြစ်ထားရင်တော့ ရွာထဲမှာ ရှိနေတတ်တယ် ရွာထဲမှာ မတွေ့ရင်တော့ မိန်းမနဲ့ အဆင်ပြေပြီး အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ကို မထွက်တော့ဘူးတဲ့ ဒီကလေးမထက် ဦးခိုင်ဆိုတဲ့လူက ပိုတော်မယ် ထင်တာပဲဗျာ
အခုဃသူနါန သ်ှသကအ့နမည နြလေိေ မှာ ကျြငညနျညြေေါနာနညအ နဲ့ ဗိာငညငျအမအေငသည ဘာသာကိုအဓိကယူထားပါတယ်။
ဒါက ဘာဘာသာကို ယူထားတာပါလဲရှင်။ အမေရိကားမှာ ရှိတာပါလား။
တစ်ခါတလေ ကိုယ်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့သူတွေ တော်ကြတာ လက်ခံမိပါတယ်။ တချို့ကျတော့ မိဘဘက်က အပြည့်အစုံပံ့ပိုးမှုပေးတာတောင်မှ ကြိုးစားမှုနည်းတဲ့သူတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ သူကျတော့လည်း မိဘကော ဘိုးဘွားတွေကော ပံ့ပိုးမှု အားကောင်းပြီးကိုယ်တိုင်က ကြိုးစားမှုရှိတဲ့သူဆိုတော့ အောင်မြင်မှုကို အလွယ်လေး ရယူနိုင်တာပေါ့နော်။ အားကျမိပါရဲ့ရှင်။
သမီး မနော ရယ် စိတ်လွယ်လိုက်တာ ။
အရမ်း အရမ်းကြီးတော့ ချက်ချင်း အထင်ကြီး အားမကျလိုက်နှင့် အုန်းလေ ။
အဘ ဖတ်မိသလောက်တော့ အခုထိ ထူးထူးခြားခြား
ဘာမှလည်း အောင်မြင်တာ ထူးချွန်တာ မတွေ့ရသေးပါလား ကွယ် ။
ကားဆိုရင် မာစီးဒီး ဒါမှမဟုတ် ဘီအမ်ဒဗလျူ စီးချင်တာပဲ
ဟုတ်တယ် အဘ …
ကျနော်လည်း အောင်မြင်တာ ထူးချွန်တာ တွေ့မိတေးဝူး..
ဘာပဲဖစ်ဖစ် … ကိုယ်နဲ့မသိလည်း …
သာယာတယ် အဆင်ပြေတယ် ဆိုရင်ပဲ
ဒီးယားစ် မစ္စတာပက်ဘလစ်ရှာ အော့ဖ် ဂေဇက် Dear mister publisher of gazette
ပလိ့ တဲလ် ဟာ ဒစ်စ် please tell her this
အိုင် ဝန်နာ ဟဲ့ ဟာ ဖော် ဘိရုမာ လန်းဂွေ့ ဝှမ်း ရှီ ကိုးမီးဘက် တူ ဘိရုမာ
I wanna help her for burma language when she come back to burma
ဘီကော့ အိုင် သင့်ခ် ရှီ ကန်နော့ တဲလ် အာဝါ လန်းဂွေ့ ဝှမ်းရှီ ကိုးမီး ဘက်
becoz I think she cannot tell our language when she come back
တင့်ခရု ပါ thank u
စတိုင်ကျတယ် ကြည့်ကောင်းတယ် မြန်မာပြည်သူလေးရဲ့ အတွေ့အကြုံကတော့
ဖတ်နေရင်း မှင်တက်နေမိတာ…၊ FR ရေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တော်တယ်လို့ဆိုရမှာ…။
ဒီ Post မှာ Comment ရေးရင်း ပက်ပက် စက်စက် ကို ရှည်သွားလို့
Post တခုကို သပ်သပ် ရေးတင်လိုက်ရတယ် ။
” အင်တာဗျူး နှင့် အဘ ( FR ) ” ဆိုပြီးတော့
အဆင်ပြေသလို တွဲပြီးသာ ဖတ်ကြပါတော့ ရွာသားတို့ရေ ။
အဘကို ခွင့်လွှတ်ကြပါကွယ် ။
ပြောရရင်.. သတင်းစာမှာ အလှပန်း/ခေတ်စမ်းလုလင်… လို့ ခေါ်တဲ့..အဲဒီကဏ္ဍ.. ထဲပါသူတွေက.. အောင်မြင်သူ.. ထူးချွန်သူတွေကို ရွေးတင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး..။
လူငယ်တွေကို.. (စင်ဂယ်လူငယ်တွေကို).. စာဖတ်သူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်ပါ..။
မြန်မာပြည်ပနေတဲ့.. ဘယ်လူငယ်မဆို..အဲဒီမှာ.. ပါလို့ရပါတယ်..။
(မှတ်ချက်..။ စိတ်ဝင်စားသူများရှိရင်.. အယ်ဒီတာဆီ..တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်..။ ကာယကံရှင်ရဲ့.. အဖေ၊အမေ၊ဦးလေး၊အဒေါ်၊ကိုကို၊မမ တို့ကလည်း.. ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်..။)
အောင်မြင်နေသူတွေအကြောင်း ဖတ်ချင်ရင်.. ထင်ရှားကျော်ကြားမြန်မာများ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍတော့ရှိတယ်.။
အခြားလူတွေအတွက်တော့ မသိဘူး။ ကျမတို့ ရွာသူားတွေအတွက် ထင်ရှားကျော်ကြားမြန်မာများ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကို ရွာထဲမှာဖွင့်လှစ်ပြီး ပထမဦးဆုံး သဂျီးနဲ့ FR အကြောင်းဗျူးပြီး တင်ပေးရင်ကောင်းမယ်.
နောင် … ဆက်လက်ပြီးတော့ ဦးကြောင်၊ ဦးပု စသဖြင့်… ပရိတ်သတ်တောင်းဆိုတာတွေ ဆက်လက်ပြီးတော့ပေ့ါ…….. :D
အဲဒီ ” အလှပန်း/ခေတ်စမ်းလုလင် ” ထဲပါလို့ မရဘူးလား ။
Title ပြောင်းသင့် ရင်လည်း ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ ။
” ရွာ့အလှပန်း/ခေတ်စမ်းအဖိုးအို/အဖွားအို ” ဆိုပြီး တော့ပေါ့ ။
နိုင်ဂျံဂါးမှာ နေတဲ့ ရွာသူားတွေ စုထားတယ်လေ ။
မနည်း ရနေပြီ ။
သားသား FR ။ အဘဆွေ ( AKSwe ) ။ ကို သစ်မင်း ။
မမှီ ( Hmee ) ။ ဦးကြောင်ကြီး ။ ဦးပု ။ ကို ဇော်မင်း ။
ကို ချို နှင့် ကို inz@ghi ဆိုရင်
အင်တာဗျူး ဖြေပေးယုံတင်မကဘူး ၊
ဓါတ်ပုံပါ ရိုက်ပေးဦးမှာတဲ့ ၊
စာရင်း လာပေးထားနော် ။
ဂယ် လား ဒဂျီး …
အဲ့ချို တာား ကိုလည်း ဗျူး ….
တားလည်း စစ်ဂနယ် ဖစ်ပီး…နိုင်ဂျံဂါးမှာပဲ..
ပီးတော့ ကြောင်လည်း ဟုတ်ဝူး လူစစ်စစ်. …ခစ်ခစ်…
ရော့ပုန်းဂီး ကို ဖလာရီ နဲ့ပါတ်ချင်တာတွေ
တိုလအအိုအိ တို့ မာရီယာအိုဇာဝါ တို့ကို ထည်လဲ တွဲချင်တာတွေ ဖြေပစ်လိုက်မယ်….ခစ်ခစ်…
ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုး ထွားကြိုင်း သန်မာ တောင့်တောင့် တင်းတင်း
ရှည်ရှည် လမြောမြော ငွားငွား စွန့်စွန့်
အပေါ်ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်း တည်ဆောက်ပုံကွဲနေတယ်
အင်ကြင်းခိုင် is အင်ကြင်းခိုင်။
မောင်သာရ is မောင်သာရ။
မြန်မာပြည်ပေါက် သမီးပျိုလေးတွေမြင်ရတော့ အဘတို့ရင်ထဲ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် အတော်ရှင်သန် ထကြွလာသဟေ့ မောင်ခိုင်ရေ……။ သို့ပေမဲ့ မြင်ကွင်းသိပ်မရှင်းဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဝတ်အစား ကြော်ငြာချင်တာ ဆိုရင်တော့ နေရာမှားနေပြီလို့ ပြောပါရစေ။ :cool:
ပြောရရင်.. ဆရာကြီးမောင်သာရကိုယ်တိုင်.. ဂဇက်ထဲလာရေးဖူးသဗျ…
ခုလည်း.. လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မှာ.. ကျမ်းမာချမ်းသာစွာရှိနေပါကြောင်း…
သူ့ ပြော ပေါက် အမှန်တွေ က အနော်တို့ အားးနာတယ် အမည်ခံ ထုံးးတမ်းးနဲ့ မကိုက်သလိုမို့ သာ။
ရွာထဲရေးတဲ့ ဆရာကြီးမောင်သာရစာလေးတွေအလျဉ်းသင့်ရင် တင်ပေးပါလားသဂျီးရယ်
အဲဒီမှာ ဆရာဘလက်က.. ညွှန်းထားခဲ့ဖူးတယ်..။ အဲဒါတွေက..ဆရာကြီးမောင်သာရက.. မြေးမလေးအကူအညီတောင်းပြီး.. ကိုယ်တိုင်တင်တာတွေပါ..
ဆရာကြီးဦးတင်မိုးလည်း… ဂဇက်ကို ကဗျာပေးသွားဖူးတယ်..။